लघुकथा : ओईलाउँदै गएका टीकाहरु - Vishwa News
लघुकथा : ओईलाउँदै गएका टीकाहरु
२०७३ सालको दशैंमा…
बाबुले छोरालाई मोवाइलमा हेर्दै उत्साही स्वरमा बोल्यो, ‘कान्छु, जसरी भए पनि यो दशैमा आउनु है ।’
मोवाइलबाट आवाज सुनियो, ‘यसपाली अफिसमा कामको चाप नै बढी छ बा । फेरि दशैं हामी अमेरिकामा पनि धुमधामै मनाउँछौँ नि । बरु हजुरहरुलाई दशैं आनन्दले मनाउन एक लाख पठाइदिन्छु नि बा।’
‘कुरा पैसाको होइन । मात्र टीका ओइलाउला की भन्ने चिन्ता हो ।’
‘दाईलाई बोलाउनुस न बा, यो दशैंमा, मेरो त कुनै सम्भावना छैन ।’ मोवाइलबाट छोराको आवाज आयो ।
‘तेरो दाजूलाई पनि काम थुप्रो छ रे यो वर्षमा, तैले जस्तै उस्ले पनि जर्मनीबाट पचास हजार पठाउँदैछ । ल भैगो ब्यस्त भए, भन्नु केही छैन । धन्य छोराहरु, तिमीहरुको कृपाले यो दशैं हामी बुढाबुढीले चाँदीको जमरा र सुनको टीका लगाएर टार्ने भयौँ । सवैका छोराछोरी तिमीहरु जस्ता होऊन् । डेढ लाखले म के मात्र गर्ने ?’ बाबुले यति भन्दै रुँदै फोन राख्यो ।
२०७४ सालको दशैंमा…
गएको शिवरात्रीमा, सत्तरी वर्ष लागेको बाबुले छोरालाई भिडियोमा नाप्यो । छोरालाई अझै लम्वाई र चौडाइमा हेर्ने इच्छाले उपलब्ध प्रबिधिको सहारा लियो । छोराको बडेमान शरीरको सजिवता, काँचको पर्दामा स्यानो सजिवतामा चल्मलाएको देखेर होला, बाबुको आँखाबाट दुईथोपा आँसु तरक्क चुहायो । बाबुले आँसु पिउँदै सोधे – ‘कान्छा, अव तँ कैले नेपाल आउँछस् ?’
‘हेरौँ, बुबा अव बिदा भयो भने आउँछु, सायद दशैतिर आउँछु कि !’
छोराले दशैतिर आउँछु कि ! भनेपनि बुढाको आशामनले छोरा दशैतिर आउँछ नै भन्ने बुझ्यो ।
‘हुन्छ, कान्छु, यसपालि दशैंमा तेरो नाममा पनि टीका अलि बढी मुछेर राख्छु है ।
जसरी भए पनि आउनु । तेरी आमाले तेरो नाम लिन थालेको पनि वर्षो भइसक्यो ।’
विडम्वना, छोरा त्यो सालको दशैमा पनि आएन ।
२०७५ को दशैंमा…
यो साल, छोरालाई आइपेडमा ओछ्याएर भलाकुसारी गरेपछि बाबुले भन्यो –‘कान्छा, आऊ यो दशैंमा जसरी भए नि, तेरी आमा विरामी छे । तेरो मात्र नाम लिइरहन्छ ।’
‘बुवा यो वर्ष त मेरो झनै भ्याउँदैन । बरु आमालाई एकपटक मोवाइल दिनुस न दर्शन गरुँ ।’ बाबुले आफ्नी रोगी स्वास्नीलाई मोवाइल दिँदै बोल्यो–
‘ला, तेरो कान्छुको दर्शन गर ।’
आमाले चाउरिएको हातले समातेको आइपेडबाट एक भद्र पुरुष स्वर कोठैभरि गुँजियो, ‘आमा, दर्शन ! के गरुँ आमा, निधारमा टीकाको प्यास छ नि त । अम्रिका थाहै छ नि हजुरलाई दिनरात फुर्सद हुँदैन । दुख नमान्नु होला आमा, यसपालि पनि पोहरझैँ फोटैमा टीका लगाइदिनुस न है ।’
२०७६ को दशैंमा…
यो दशैंमा भने छोरा आफैले फोन गरी खुसीले गदगद हुँदै बोल्यो–
‘बुबा हजुर, यो दशैंमा म घर आउँदै छु । हामीले हजुरहरुको निम्ति धेरै सामान जोरजाम गरेको छौँ । हजुरको निम्ति आइपेड र आमालाई अमेरिकाको महँगा साडीहरु…।’
यो वर्ष बाबुको स्वरमा गतसाल झैं उत्साह थिएन । आवाज गलेको थियो । त्यही ओइलाएको स्वरमा आफूलाई सम्हाल्दै बोल्यो–
‘पर्दैन कान्छा, अव आउन । तेरी आमाले भर्खर मात्र तेरो नाम लिएर प्राण त्यागेकी छे । तैले इच्छा नै गरेको हो भने नआइजो पनि भन्दिनँ । सिधै आर्यघाटमा आउनु । केही ल्याउनु पर्दैन तैले अम्रिकाबाट । कान्छा पनि होस्, दागबत्ती अझै हामीले तेरै नाममा छोडेर राख्या छौँ । चौबीस घण्टा समय दिन्छौँ, पुगिस् भने तैले झोस्न पाउँछस् , होइन भने त्यो पनि हामी मेसिनलाई सुम्पिँदै छौँ । अँ, लेकटप, मोबाइल, टिभी केही पनि ल्याउनु पर्दैन है । आउँदा, अमेरिकाबाट एउटा सेतो कपडा, बास्नादार धुपहरु र सके थोरै दाउरा लिएर आउनु है । हामीले अहिलेसम्म पाएको सवैभन्दा मूल्यवान् कोशेली सम्झेर थाप्नेछौँ । दशैंचाँही मनाइन्न यसपालि । टीका जुठो भो कान्छु, फेरि ओइलाइ पनि सकेको छ । यो घराँ, अब कुनै पनि दशैंमा टीका फुल्दैन’, उताबाट छोराले दशपटक हेलो, हेलो भनेपनि यताबाट केवल सुँक्कसुँक्कको मात्र प्रत्युत्तर आईरह्यो ।
अन्तरर्राष्ट्रिय बजारमा आलोचित बन्यो सगरमाथा टुप्पोको भिड